Huawei P9 Lite ကိုဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Huawei သုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်တိုင်အောင်၎င်း၊ Huawei က P8 Lite ကိုပိုက်ဆံအတွက်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးကိုပေးပြီးဒီ Lite မိသားစု ၀ င်သစ်ကိုအရောင်းရဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုတော့ဒါဟာအလှည့်ပါ Huawei P9 Lite ။
သူ့အစ်ကိုကို (၆) လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမင်းပြပြီးပြီ၊ Huawei P9 Lite သုံးသပ်ချက်, ဖုန်းတစ်လုံးအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏ဘုရင်သစ်ဖြစ်လာရန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့အထောက်အထားများ? ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ ကိုက်ညီရန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့်ကင်မရာ။
1 Huawei ရှာဖွေနေသည့်မျဉ်းအတိုင်းလိုက်သောကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း
1.1 Huawei P9 တွင်အများအားဖြင့် polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကိုယ်ထည်တစ်ခုရှိသော်လည်းထုတ်လုပ်သူသည်စျေးနှုန်းမြင့်တက်စေခြင်းမရှိဘဲသဟဇာတဖြစ်သောမျှတမှုရှိသောပစ္စည်းကိုရရှိခဲ့သည်။
2 Huawei P9 Lite ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
2.1 Huawei P9 Lite ဖြင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုကစားသည်ဖြစ်စေမည်သည့် application လိုအပ်သည်ဖြစ်စေဂရပ်ဖစ်အရင်းအမြစ်မည်မျှပင်လိုအပ်ပါစေမည်သည့် application ကိုမဆိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများစွာရှိသောကြောင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမျှကစားခြင်းတွင်ပြproblemနာမရှိပါ။
3 IPS panel ကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ
4 Huawei P9 Lite ကင်မရာသည်၎င်း၏ဖမ်းယူနိုင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အံ့အားသင့်သည်
4.1 Huawei P9 Lite ၏ကင်မရာတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သူများကိုနှစ်သက်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ် mode တစ်ခုရှိသည်
4.2 Huawei P9 Lite ဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံနမူနာများ
6 EMUI 4.1 သည်ယခင်ဗားရှင်းများ၏ပြtheနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်
7.1 Huawei P9 Lite ၏ပုံပြခန်း
ကျွန်ုပ်၏ HTC One M7 သည်၎င်း၏ပြီးမြောက်မှု၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများပါသောဖုန်းများကိုလိုချင်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ Huawei P9 Lite နှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Huawei ၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်၎င်းကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသည် မြင့်မြတ်သောပစ္စည်းများရှာဖွေပါ ဖုန်းတလုံးတည်ဆောက်တဲ့အခါသူကသူ့စက်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးကောင်းမွန်စွာခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တယ်။
ထို့ကြောင့် Huawei P9 တွင်အများအားဖြင့် polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိသော်လည်း ထုတ်လုပ်သူတစ်သဟဇာတနှင့်မျှတသောအစုံအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် စျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ။
နှင့်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် သတ္တုဘောင်ကိုယ်ထည်န်းကျင် built ၎င်းသည် Huawei P9 ကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးကောင်းမွန်သောဆုပ်ကိုင်မှုကိုပေးသည်။ ရှေ့ဖန်ခွက်ကိုအနည်းငယ်ကွေးသောထောင့်များဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းကို terminal ကိုကိုင်ထားရန်လွယ်ကူစေသည်။
Su ကျောဖုံး ထိုသို့ အလူမီနီယမ်ကိုပုံဖော်ပေးသည့် brushed texture ရှိသောပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သင်တို့ထိလိုက်သောအခါ၎င်းသည်ပိုလီကာဗွန်နိတ်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ထိတွေ့အလွန်သာယာသောနှင့်အစွန်းအထင်းမှခုခံအားအလွန်လှပသော finish ကိုအောင်မြင်။
Huawei P9 တွင်အများအားဖြင့် polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကိုယ်ထည်တစ်ခုရှိသော်လည်းထုတ်လုပ်သူသည်စျေးနှုန်းမြင့်တက်စေခြင်းမရှိဘဲသဟဇာတဖြစ်သောမျှတမှုရှိသောပစ္စည်းကိုရရှိခဲ့သည်။
၏တိုင်းတာမှုနှင့်အတူ 146.8 72.6 7.5 မီလီမီတာ အလေးချိန် ၁၄၇ ဂရမ်သာအလေးချိန်ရှိသည့် Huawei P147 Lite သည်အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးဖုန်းတစ်မျိုးတည်းဖြင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ၅.၂ လက်မအရွယ် panel ကိုတပ်ဆင်ထားသည်ဆိုပါက Huawei သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်ဟုပြောရပေမည်။
ဖုန်း ဂန္နှင့်ကြော့လိုင်းများရှိပါတယ်, ယခင်မော်ဒယ်များအပြီးတွင်နှင့် Huawei က၎င်း၏ထုတ်ကုန်များတွင်စိမ်ကြောင်းကိုယ်ပိုင်စတိုင်ပြသအောက်ပါ။ အနောက်ဘက်တွင် 13 megapixel ကင်မရာကို LED flash ဖြင့်တွေ့ရမည်။
အခြားကင်မရာများတွင်တွေ့ရသောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမလိုပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတာကသူတို့နေရာချထားတာပါ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီအနေအထားငါ့အဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ရှေ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထက်သုံးစွဲဖို့အများကြီးပိုအဆင်ပြေပေမယ့်အရောင်များကိုမြည်းစမ်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အောက်ခြေမှာရှိသည် အမှတ်တံဆိပ်လိုဂို။ Terminal ၏ on / off ခလုတ်အပြင်အလူမီနီယံဘောင်သည်အသံထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များနှင့်အတူညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသည်။
ဤခလုတ်များအားလုံးသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ထိတွေ့မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပြီးအကောင်းဆုံးသောခရီးသွားခြင်းကိုပေးစွမ်းသည်။ ပါဝါခလုတ်သည်၎င်းကိုအသံထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များနှင့်ကွဲပြားစေရန်ခွင့်ပြုထားသောကြမ်းတမ်းမှုရှိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်သင်အလိုအလျောက်ခလုတ်တစ်ခုချင်းစီ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
Huawei P9 နှင့်မတူသည်မှာ Lite model ၏ထိပ်တွင် 3.5 mm jack output ရှိသည်အောက်ပိုင်းတွင် Speaker output, micro USB port နှင့် microphone တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် terminal ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် micro SD ကဒ်အထိုင်အပြင် nano SIM ကဒ်ထည့်ရန် slot တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
Huawei P9 Lite ၏ရှေ့ဘက်တွင်သူ၏အစ်ကိုများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အောက်ခြေတွင်ထုတ်လုပ်သူ၏လိုဂိုနှင့်ထိပ်ဘက်တွင် LED မီးရောင်ပါသောကင်မရာရှိသည်။ မျက်နှာပြင်သည်ရှေ့ဘက်၏အားသာချက်ကိုရယူသည်။ အနိမ့်ဆုံးဘေးထွက် frames များကိုရှိပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဝေဖန်လို့မရပါဘူး။ ကြောင်းအကောင့်သို့ယူပြီး Huawei P9 Lite ကို ၂၄၉ ယူရိုကျသင့်သည်, အပြီးသတ်သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အညီဖြစ်သကဲ့သို့လက်၌အလွန်ကောင်းသောခံစားရသောစက်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။
Huawei P9 Lite ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ
ပုံစံ P9 Lite ကို
operating system EMUI 6.0 အလွှာအောက်ရှိ Android 4.1 Marshmallow
ဖန်သားပြင် ၅.၂ လက်မ IPS ၂.၅D နည်းပညာနှင့်5x2HD resolution ဖြင့် ၄၂၃ dpi ထိရှိသည်
Processor ကို HiSilicon Kirin 650 (53 GHz အမြန်နှုန်းရှိ Cortex-A 2.0 core နှင့် ၁.၇ GHz Cortex-A53 core လေးခု)
GPU ကို မာလီ-T880 MP2
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 microSD မှတစ်ဆင့် 128 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
နောက်ကင်မရာ ၁၃.၁ MPX Sony IMX214 အာရုံခံကိရိယာ ၂.၀ focal aperture / autofocus / face detection / panorama / HDR / LED dlash / geolocation / 13p ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ရှေ့ကင်မရာ 8 MPX focal aperture 2.0 / မျက်နှာပြင်မှတဆင့် Flash / 1080p ဗီဒီယို
အခြားအင်္ဂါရပ်များ FM ရေဒီယို၊ လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ
ရှုထောင့် 146.8 72.6 7.5 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 147 ဂရမ်
စြေး အမေဇုံအပေါ် 249 ယူရို
ယနေ့တွင်အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့် high-end အကြားစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်သည်ပိုမိုမှုန်ဝါးလာသည်။ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့စပိန်ဘာသာနဲ့ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှာသင်မြင်ဖူးသလိုပဲ၊ Huawei P9 Lite သည်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည် မည်သည့်ဂိမ်း (သို့) အပလီကေးရှင်းကိုမဆိုအခက်အခဲမရှိဘဲမည်မျှအရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည်ဖြစ်စေရွှေ့ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင် P9 Lite သည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei ရဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့စီလီကွန်နှလုံးသားအကြောင်းပြောပြီးစမယ် HiSilicon Kirin 650 ကြီးမားသော LITTLE ဖွဲ့စည်းမှုတွင် (၈. Cortex A4cores ၂.၀ GHz အမြန်နှုန်းနှင့် ၂.၀ Cortex A 53 ၁.၇ တွင် ၁.၇ ရှိ) ရှစ်ခုစီ SoC ၈ ခုနှင့် ၄ င်းသည် Mali T2.0 MP4 GPU နှင့် 53 GB RAM မှတ်ဉာဏ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ခဏကြိုးကတိပေး။
Interface ကအရမ်းမြန်တယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်နဲ့ဂိမ်းကစားရတာဘာပြhadနာမှမရှိဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Huawei P9 Lite ရှိပေမယ့်ဂိမ်းတွေအများကြီးကို install လုပ်လို့မရပါဘူး GB ကို internal storage ကို 16, 10.5 GB ကိုအသုံးပြုသူမှရရှိနိုင်ပါသည်။
Huawei P9 Lite ဖြင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုကစားသည်ဖြစ်စေမည်သည့် application လိုအပ်သည်ဖြစ်စေဂရပ်ဖစ်အရင်းအမြစ်မည်မျှပင်လိုအပ်ပါစေမည်သည့် application ကိုမဆိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများစွာရှိသောကြောင့်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမျှကစားခြင်းတွင်ပြproblemနာမရှိပါ။
ဒါကငါဝေဖန်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ရှိသော်လည်း Huawei P9 Lite သည် micro SD ကဒ်အထိုင်တစ်ခုရှိသည် မှတ်ဥာဏ်ကို 128 GB အထိချဲ့နိုင်ပြီးဖုန်းထဲမှာ 16 GB လောက်တော့နည်းနေသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူက 32 GB ရှိရင်ဒီကိစ္စမှာပြီးပြည့်စုံလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် SD မှတ်ဉာဏ်တွင်ထည့်သွင်း။ မရနိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များရှိသဖြင့်၎င်းသည် terminal ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနည်းငယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ နောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာအချက်မှာ gyroscope ပါရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့မရှိခြင်း။ သငျသညျအွန်လိုင်းအနည်းငယ်ရှာဖွေလျှင်ဤပြproblemနာကိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေမယ့်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် Huawei P9 Lite တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပြီး Huawei P9 တွင်မရှိပါ FM ရေဒီယို။ က deaffeinated ဗားရှင်းဒီ option ကိုရှိကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ ငါ့အတွက်ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ငါ P9 Lite မှာဒီ function ရှိတာကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။
El စပီကာမှန်ကန်သောထက်ပိုမိုအသံဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်တို့ကစားနေတုန်းအမှားအယွင်းနဲ့ဖုံးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမယ့်။ Terminal အများစုတွင်ရှိသည့်ပြwhoseနာမှာအရွယ်အစားတိုးလာခြင်းနှင့်အတူစပီကာများကိုရှေ့တွင်နေရာချရန်ဖြစ်သည်။
ငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်နောက်ထပ်အသေးစိတ်တစ်ခုမှာ သင်၏ဂျီပီအက်စ်မည်မျှအလုပ်လုပ်သည်။ ငါပြေးနေတဲ့အခါငါအဲဒါကိုအများကြီးသုံးတယ်။ Huawei P9 Lite ရဲ့ GPS ကကျက်သရေနဲ့အလုပ်လုပ်တာကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြhadနာမရှိဘူး။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းကောင်းတစ်လုံးကိုရှာဖွေနေတဲ့မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုမျှော်လင့်ချက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့မျှမျှတတရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး - ယူရို ၃၀၀ အောက်သာသုံးစွဲရမယ်။
IPS panel ကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ
Huawei P9 Lite သည်အရွယ်အစားအလွန်ကန့်သတ်ထားသော်လည်း၎င်းသည် P9 နှင့်တူညီသည်။ ကျနော်တို့ကတစ် ဦး အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် 5.2 လက်မ IPS panel ကို ၎င်းသည် Full HD 1080 resolution သို့ရောက်ရှိပြီး၎င်းသည်လုံးလုံးလျားလျားအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးကြည်လင်ပြတ်သားမှုအဆင့်ကိုပေးစွမ်းသည်။
ကျနော်တို့အကောင့်ထဲသို့ယူလျှင်မျှော်လင့်ဖို့တစ်ခုခု တစ်လက်မလျှင် ၃၀၀ pixels ရှိသည် ၎င်းသည်၎င်း၏ဖန်သားပြင်ရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်သဘာဝအရောင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်သဲလွန်စမရှိဘဲကမ်းလှမ်းသည်။ အရောင်ချိန်ညှိမှုသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းဖန်သားပြင်၏အပူချိန်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်နှစ်သက်သော Huawei ကိရိယာများ၏ထူးခြားမှု။
El ကြည့်ရှုထောင့်မှန်ထက်ပိုပါတယ်စုံလင်သောတောက်ပမှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာလျော်ကြေးပေးခြင်းများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများခံစားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရောင်ခြည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ရှိသော်လည်း၎င်းဖန်သားပြင်၏ပြသနာများကိုပြသနာမရှိဘဲမြင်နိုင်သည်။
Un လအနည်းငယ်အကြာ high-end ကြီးစိုးကြောင်း panel ကို ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကြွက်သားကိုပြသော Huawei P9 Lite နှင့်အပြည့်အဝလိုက်နာသည်။ ၎င်းသည် c ကိုအလွန်ရှင်းလင်းစေသည်အလယ်အလတ်အဆင့်ကဏ္ sector ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရန်ရောက်လာကြသောအတိုက်အခံများ။
Huawei P9 Lite ကင်မရာသည်၎င်း၏ဖမ်းယူနိုင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အံ့အားသင့်သည်
ဤအပိုင်းသည်ဖုန်းတွင်အလေးချိန်ပိုများလာသည်။ ဖွဲ့စည်းမှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Huawei သည် Leica နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော၎င်း၏ dual-ကင်မရာစနစ်ကိုမသုံးနိုင်ပါ။ P9 Lite တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းတစ်ခုရှိပြီးထူးခြားသောရလဒ်ကိုပေးသည်။
Huawei P9 Lite ၏ရှေ့ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်a8 focal aperture ပါသော 2.0 megapixel အာရုံခံကိရိယာ နှင့်အလှအပ mode ကို။ ထို့အပြင်ဖုန်းသည်အလင်းရောင်နည်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် selfies များကိုအလင်းရောင်နှင့်ကိုယ်တိုင်ပုံတူရိုက်ရန်မျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုကိုအသုံးပြုသည်။
Huawei P9 Lite ၏နောက်ကျောတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာမည့်နေရာတစ်ခုရှိသည် အစွမ်းထက်သော 214-megapixel ရှိသော Sony IMX13 အာရုံခံကိရိယာသည် 2.0 focal aperture နှင့် LED flash ပါ ၀ င်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က Nexus6ကဲ့သို့သော high-end terminal များကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ချက်သည်သက်သေပြရန်ထက်ပိုသည်။
အဆင့်မြင့်သောဆိပ်ကမ်းများ၏ထူးကဲကောင်းမွန်မှုကိုမရရှိပါကပြုလုပ်ထားသောဖမ်းယူမှုများသည်အရည်အသွေးကောင်းကိုရရှိသည်။ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်နှစ်ခုလုံး Huawei P9 Lite ၏ကင်မရာသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်အလင်းရောင်ကောင်းမွန်သောမြင်ကွင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရောင်မျိုးပွားခြင်းနှင့်မျှမျှတတပြည့်စုံစွာလျော်ကြေးပေးခြင်း။
El HDR စနစ် အလိုအလျှောက် mode နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မည်သည့် parameters ကိုမဆိုညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအလွယ်တကူဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သောအသုံးပြုသူများသည်ယင်းကိုသဘောကျမည်။
Huawei P9 Lite ၏ကင်မရာတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သူများကိုနှစ်သက်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ် mode တစ်ခုရှိသည်
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်အတူဝါရင့် တကယ်ပြည့်စုံတဲ့ကင်မရာဆော့ဗ်ဝဲ အလှအပအသုံးအဆောင်၊ HDR၊ ကောင်းမွန်သောအစားအစာ၊ ညအိပ်၊ မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ချက် ...
ဓာတ်ပုံချစ်သူများကိုနှစ်သက်စေမည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည်အတူပါ ၀ င်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် mode ကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုစလုံးအတွက်ပါ၊ ဒီအရာကအဖြူချိန်ခွင်လျှာ၊ ဆူညံသံသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုစတဲ့မည်သည့်အရာကိုမဆိုချိန်ညှိနိုင်စေပြီး၊
သင်ဓာတ်ပုံလောက၏အသစ်စက်စက်ဖြစ်လျှင် သငျသညျအလိုအလျှောက် mode ကိုသုံးနိုင်သည် ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောဖမ်းယူမှုများရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် Huawei P9 Lite ကင်မရာ၏ဖြစ်နိုင်ချေများသည်အထင်ကြီးနေသောကြောင့်မတူညီသော parameters များကိုစတင်ဖွင့်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။
Huawei P9 Lite ဖြင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံနမူနာများ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်အရေးအပါဆုံးကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ Huawei P9 Lite ၏တုန့်ပြန်မှုသည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ထက်ပိုသည်ဟုငါပြောရန်လိုသည် Huawei ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပေါင်းစည်းလိုက်ပြီဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားပါကမျှော်လင့်ရမည့်အရာ 3.000 mAh ဘက်ထရီ အလွန်တင်းကျပ်စွာတိုင်းတာနှင့်အတူ terminal ကို၌တည်၏။
ငါနာရီဝက်ကစား, အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကွန်ယက်များအသုံးပြုခြင်း, နှစ်နာရီအကြောင်းကိုဂီတကိုနားထောင်ခြင်းနှင့်ငါနှင့်အတူအိမ်ပြန်ငါအင်တာနက်ကို surfing ခဲ့ကြရသောပုံမှန်အသုံးပြုသောနေ့၌ 30 - 35% ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားဘက်ထရီ။
ငါဖုန်းကိုနောက်ထပ်ကြံပေးတဲ့အခါ 15% ဘက်ထရီကိုရောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ခန့်မှန်းခြေပျှမ်းမျှသည် ဖန်သားပြင်ကြာချိန် ၆ - ၇ နာရီ။ ပြီးတော့ Huawei ကဖုန်းကို stand-by လုပ်တဲ့အခါစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဤသို့လုပ်ရန်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်နောက်ခံရှိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိတ်ထားသည်။
ဟုတ်တယ်၊ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းများကိုဆက်လက်တက်တက်ကြွကြွလုပ်လိုသည်ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည် သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့် WhatsApp အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အပျက်သဘောဆောင်သောအချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P9 Lite တွင်အားသွင်းမြန်ဆန်သောစနစ်မရှိပါ။
EMUI 4.1 သည်ယခင်ဗားရှင်းများ၏ပြtheနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်
ထုံးစံအလွှာကိုအစဉ်မုန်းပါတယ်။ ငါအကြိမ်တစ်ထောင်သန့်ရှင်းတဲ့ Android ကိုပိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့ရဲ့ interfaces တွေကိုချွင်းချက်အနည်းငယ်မှလွဲရင်မှားယွင်းတဲ့အမှားတွေကိုကျူးလွန်နေကြတယ်။ ထို့အပြင် Huawei သည်ချွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
ကံကောင်းတာက၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း EMUI 4.1 ၎င်းသည်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင်၎င်း၏ desktop အခြေပြုစနစ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိလျှင်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်အလွန်အဆင်ပြေသောစနစ်ကိုတွေ့ရှိသည်။ App Drawer မရှိဘူးလား။ သင်၏ application များကိုသက်တောင့်သက်သာဖိုလ်ဒါများဖြင့်စုစည်းနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ။
ဒီ interface ကအရမ်းလှတယ်၊ အရောင်အသွေးစုံတယ်။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အစွမ်းထက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ ဆောင်ပုဒ်မန်နေဂျာ Huawei မှစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သောတန်ချိန်များစွာရှိသည်။
အထူးအလေးပေးသည် လက်ဗွေဖတ်စက်, ကျနော့်အမြင်တွင်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံး။ Huawei P9 Lite သည်အခြားသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာကိုအခြားသော P9 မိသားစုများနှင့်အတူတူပင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အမှန်တရားမှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
La တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းအထင်ကြီးစရာပါယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေရာကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းတွင် ၄ င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့လည်းရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖန်သားပြင်ကိုလျင်မြန်စွာသော့ဖွင့်ခြင်းအပြင်အမူအယာအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ရန်အမူအယာများကို configure လုပ်နိုင်သည်။
တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအရည်အသွေးညံ့သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သူများအဖြစ်ပေါင်းသင်းသောသူများရှိနေသေးသော်လည်း၊ Huawei ပြီးပြည့်စုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်နှင့်စျေးကွက်ရှိနာမည်ကြီးများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာစေရန်အတွက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်မကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခဲ့သည်။
မင်းဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်ခုလိုချင်ရင် Sony, Samsung, LG နဲ့ HTC တို့ကိုကျော်သွားရမယ်။ Huawei သည်ခုန်ကျော်လွှားခြင်းများဖြင့်မြေပြင်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်စမတ်ဖုန်းအများဆုံးရောင်းချသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးဥရောပတွင် Samsung ကိုကျော်တက်တော့မည်။
Huawei ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးထွားနေတာလဲ။ ကဲ့သို့ဆိပ်ကမ်းအားဖြင့် Huawei Nova Plus သို့မဟုတ်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင် Huawei P9 Lite၊ အရည်အသွေးကိုအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ငါ့ခံစားချက် Huawei P9 Lite ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက် အလွန်ရှင်းပါတယ် Huawei ထပ်လုပ်လိုက်ပြီ။
တကယ့်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကောင်းစွာလျော်ကြေးပေးသည့် Huawei P8 Lite ကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူအားလုံးကိုတစ်နှစ်အကြံပြုခဲ့သည်။ အခုငါရွေးစရာနှစ်ခုကိုပေးမယ် Moto Plus အား G4 ဒါမှမဟုတ်ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ Huawei P9 Lite သူတို့ရွေးချယ်ခွင့်ကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခွင့်ပြုပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကဏ္ sector ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဘုရင်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်မှုလား P9 Lite သည်၎င်း၏ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းအတွက်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ။
သင်ဖတ်ရန်လည်းအကြံပြုပါသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် Huawei P9 ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်များ
Huawei P9 Lite ၏ပုံပြခန်း
Huawei က P9 Lite ကို
16 GB မှတ်ဉာဏ်ကငါ့အတွက်တရားမျှတတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei P9 Lite၊ အလယ်အလတ်တန်းစားဘုရင်အသစ်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း
5,5 "1080p မျက်နှာပြင်နှင့် 4GB RAM ပါဝင်သည့် Moto M ကိုနိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင်ကြေညာမည်